ပထမဆုံး C919 ဂျက်လေယာဉ်အား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ပွဲဦးထွက်ပျံသန်းမှုအောင်မြင်စွာ ပြီးစီး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းရှီးပြည်နယ် မြို့တော် နန်ချန်းမြို့ရှိ ယောင်ဟူလေဆိပ်ရှိ နန်ချန်း လေယာဉ်ပျံသန်းမှုကွန်ဗင်းရှင်း ၂၀၂၀ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ C919 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်အား ပြေးလမ်းပေါ်၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပထမဆုံး C919 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီးအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် မေ ၁၄ ရက်က ပွဲဦးထွက်ပျံသန်းမှု အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လေယာဉ် ကော်ပိုရေးရှင်း (COMAC) အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ထားသော B-001J ကုတ်နံပါတ်ရှိသော လေယာဉ်သည် ရှန်ဟိုင်း Pudong နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှ နံနက် ၆:၅၂ နာရီက ပျံတက်ခဲ့ပြီး နံနက် ၉:၅၄ နာရီတွင် ယင်းနေရာ၌ပင် ဆင်းသက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေယာဉ် ပျံသန်းချိန်မှာ ၃ နာရီ ၂ မိနစ်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း၊ လေယာဉ်မှူးများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများက သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအားလုံး ပြီးပြည့်စုံရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းနှင့် လေယာဉ်ကလည်း အခြေအနေကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း COMAC က ဆိုသည်။
China Eastern Airlines နှင့် COMAC တို့သည် C919 လေယာဉ် ၅ စင်း ဝယ်ယူရန် ယမန်နှစ် မတ်လက စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး လေယာဉ်များ လွှဲပြောင်းပြီးနောက် ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် အဓိက အခြေစိုက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ C919 လေယာဉ် ၆ စင်းအား ရှန်ဟိုင်း၊ ယန်လျန်၊ Dongying နှင့် နန်ချန်း စသည့်နေရာများတွင် မြေပြင်နှင့် ဝေဟင် စမ်းသပ်ပျံသန်းများစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး C919 အနေဖြင့် ယင်းလေယာဉ်အမျိုးအစား စစ်ဆေးမှု ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သော ဂျက်လေယာဉ်ကြီးတွင် ထိုင်ခုံ ၁၅၈-၁၇၄ ပါဝင်ပြီး ကီလိုမီတာ ၄,၀၇၅-၅,၅၅၅ အထိ ပျံသန်းနိုင်သည်။ အဆိုပါ လေယာဉ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပွဲဦးထွက်ပျံသန်းမှုကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
SHANGHAI, May 14 (Xinhua) — The first C919 large passenger aircraft to be delivered completedasuccessful maiden test flight on Saturday, according to the Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).
China’s indigenously-developed jet, coded B-001J, took off at 6:52 a.m. from Shanghai Pudong International Airport and landed at the same site at 9:54 a.m.
During the flight that lasted three hours and two minutes, pilots and engineers coordinated to complete all designed operations, and the plane was in good condition, said COMAC.
In March last year, China Eastern Airlines and COMAC signedapurchase contract for five C919 planes, which will be based mainly in Shanghai after delivery.
Since 2019, six C919 jets have conductedaseries of ground and flight tests in places such as Shanghai, Yanliang, Dongying and Nanchang. In November 2020, the C919 received its type inspection authorization.
The C919, China’s first self-developed trunk jetliner, has 158-174 seats andarange of 4,075-5,555 km. The plane conducted its successful maiden flight in 2017. Enditem
Photo : China’s C919 jet taxis on the runway during the 2020 Nanchang Flight Convention at Yaohu Airport in Nanchang, capital of east China’s Jiangxi Province, Oct. 31, 2020. (Xinhua/Zhou Mi)